Kuyini ukuxoshwa kwenhloso, izimbangela, ukuthi kusebenza kanjani nokunxephezela | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 26/07/2021 20:28 | Kubuyekezwe ku- 26/07/2021 20:34 | Umsebenzi
Ukuba nomsebenzi akusho ukuthi ngeke uxoshwe nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Eqinisweni, kufanele kube khona imbangela nokwaziswa ukuze kuthi, esikhathini esifushane, usuke kokuqashiwe uye kokungasebenzi. Futhi esinye salezo zibalo yilokho okuthiwa ukuxoshwa kwenhloso.
Kepha,kuyini ukuxoshwa kwenhloso? Yiziphi izizathu ezinganikezwa ukuze kwenzeke? Futhi yisiphi isinxephezelo onaso? Uma ufuna ukwazi kabanzi ngalolu hlobo lokuxoshwa unilateral ngumqashi, sizokhuluma ngakho.
1 Kuyini ukuxoshwa kwenhloso
2 Yini imbangela yokuxoshwa ngenhloso
4 Yini ekhiqizwa isinxephezelo
5 Ngabe ukuxoshwa kwenhloso kungabhekwa njengokungenabulungiswa noma okuyize?
I-Athikili 52 yeSitatimende Sabasebenzi isitshela nge Ukuqedwa kwenkontileka ngezizathu ezizwakalayo, Ngaleyo ndlela unika umqashi amandla okuxosha isisebenzi uma ehlangabezana nanoma iziphi izimbangela ezibalulwe kule ndatshana. Futhi ngokuhlangana, okungukuthi, ngesinqumo sabo, ngaphandle kwesisebenzi, ngaleso sikhathi, abakwazi ukwenqaba.
Vele, ungakugxeka ukuxoshwa kwakho, futhi kuzoba yijaji elinqumayo ukuthi bekufanele yini noma, kunalokho, alisebenzi noma alilungile.
Ngamafuphi, singachaza ukuxoshwa okuyinjongo njengenye lapho umqashi engaphephela khona ukuze axoshe abasebenzi abahlukumeza ukuthembeka kwabo okuhle futhi abangawenzi umsebenzi ngendlela efanele futhi kuncike kulokho okusungulwe eSitatimendeni Sabasebenzi.
Akunasikhathi lapho kucatshangwa ukuthi umqashi uzokwenza ngokukholelwa okubi ukuphoqelela lesi sibalo sabasebenzi, kepha kuyithuluzi ongaphatha ngalo izinsiza zabantu onazo.
Yini imbangela yokuxoshwa ngenhloso
Njengoba kushiwo ku-athikili 52 ye-ET, izizathu zokuthi kungani inkampani ingaxosha isisebenzi ngokufanele yilezi:
Ngenxa yokungakwazi kwesisebenzi. Ukuthi lokhu bekwaziwa noma kwenzeke ngemuva kokusayina inkontileka yomsebenzi.
Ukuntuleka kokuzivumelanisa nomsebenzi. Ngokusobala, inkampani kufanele inikeze isikhathi sokuzivumelanisa nomsebenzi; futhi ngikunikeze lonke uqeqesho oludingekayo ukuze ufunde ukuphatha imisebenzi yakho yomsebenzi. Kepha uma ingaguquguquki, umqashi unikwa amandla okuqeda ubudlelwano bokuqashwa.
Ngezizathu eziboniswe ku-athikili 51.1 ye-ET. Sikhuluma ngezimbangela zezomnotho, zenhlangano, zokukhiqiza noma zezobuchwepheshe. Zonke zichaziwe ku-athikili, kepha ngaphezulu kubhekiswa kuzinguquko enkampanini, mhlawumbe ngoba ukwehla kokukhiqiza, ngoba kunezinkinga zomnotho, kudingeka abasebenzi abancane, njll.
Isamba esanele senkontileka. Kulokhu, kushiwo ukusayinwa kwenkontileka esekwe nguMbuso. Kuphela uma abasebenzi benziwe ngokusemthethweni yinhlangano engenzi nzuzo, futhi benenkontileka engapheli, lapho isibalo sokuxoshwa okuyinjongo singasetshenziswa.
Ukuze umqashi, noma inkampani, isebenzise ukuxoshwa okunenhloso ebudlelwaneni bokuqashwa, kuyadingeka ukuthi inqubo qala ngencwadi ebhaliwe yokuxoshwa.
Kumele isho ukuthi yini imbangela evumela lokhu kuxoshwa, kanye nemibhalo edingekayo yomsebenzi ukuze ahlole ukusebenza kwenkampani.
Ngaphezu kokuxoshwa, umsebenzi uzothola isinxephezelo esihambelana nesikhathi asichithe emsebenzini.
Uma isisebenzi singavumelani nalesi sinqumo, singasayina isaziso sokuyekiswa ngokuthi "okungathobeli" bese sibhala usuku. Kusukela ngaleso sikhathi, unezinsuku zebhizinisi ezingama-20 zokwenza isimangalo usebenzisa ibhalothi yokubuyisana.
Le ncwadi yokuxoshwa nayo kufanele iyiswe ehhovisi lezemisebenzi, i-SEPE, ngoba ingenye yemibhalo abazoyicela ukucubungula umhlomulo wokungasebenzi, uma kwenzeka befanelekile. Manje, uma umsebenzi engalithokozelanga iholide, izinsuku ezisalindile, njll. kuzofanele ulinde lezo zinsuku zikhokhwe (nokuthi umqashi azibizele zona) ukuze afake isicelo sokungasebenzi.
Ukuxoshwa kwenhloso akusebenzi ngokushesha, kepha kufanele kube nesaziso sezinsuku eziyi-15, isikhathi lapho umsebenzi uqobo enamahora ayisithupha okukhokhelwa ngeviki ukuze abe nesikhathi sokufuna umsebenzi omusha. Lokho wukuthi, uma imbangela seyizisiwe, isisebenzi sizoqhubeka sisebenze ezinye izinsuku eziyi-6, kepha amahora ayisithupha ngeviki ngeke aze aye emsebenzini, yize ezokhokhiswa, ngoba lawo mahora asetshenziselwa ukusesha umsebenzi omusha.
Yini ekhiqizwa isinxephezelo
Konke ukuxoshwa okuyinjongo kunelungelo lokuthola isinxephezelo. Manje, singathola imicabango emibili ehlukene.
Ngokuvamile, futhi inqobo nje uma ukuxoshwa kwenhloso kufanelekile, okusho ukuthi umthetho wawulandelwa, isisebenzi siyoba nelungelo ukuthola izinsuku ezingama-20 zomholo ngonyaka osetshenzisiwe. Vele, kunesilinganiso sezinkokhelo zenyanga eziyi-12.
Uma umsebenzi ethi futhi ukuxoshwa kwenhloso kubhekwa njengokungemukeleki, khona-ke izindlela ezimbili zinikezwa umqashi: o buyisela umsebenzi futhi, umkhokhele umholo angakaze awuthole kusukela ngesikhathi axoshwa ngaso; noma ukhokhe isinxephezelo, kuleli cala okungeke kube yizinsuku ezingama-20 ngonyaka ezisetshenzisiwe, kepha kusetshenziswe izinsuku ezingama-45/33 ngonyaka.
Ngabe ukuxoshwa kwenhloso kungabhekwa njengokungenabulungiswa noma okuyize?
Iqiniso ngukuthi yebo. Futhi izizathu eziyinhloko zokuthi kungani kungenzeka lokho, okubuye kujwayelekile, ukuthi inkampani uqobo, ekwazisweni kokuxoshwa, ayizazi izimbangela zokuchithwa kwayo. Uma lokho kwenzeka, umsebenzi unelungelo lokungavumelani nesinqumo futhi abike isimo ukuze umuntu wesithathu ahlaziye isimo futhi unqume ukuthi ngabe inkampani inikela ngayo yonke imibhalo edingekayo yokwenza ukuxoshwa kusebenze.
Ngaphandle kwalokho, isisebenzi besizothola isinxephezelo (noma sibuyele emsebenzini waso).
Ngaphakathi kwezinhlobo zokuxoshwa, ukuxoshwa ngenhloso mhlawumbe kungenye yezinto ezingaziwa kakhulu, kodwa kukhona, futhi izinkampani eziningi, lapho zibona ukuthi azikwazi ukuqhubeka nalesi simo, zikusebenzisa ukuqeda ubudlelwane bomsebenzi. Ubumazi? Wake wakuthola lokhu ebudlelwaneni bakho bomsebenzi? Sitshele ngecala lakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Kuyini ukuxoshwa kwenhloso